Shilalekha » माधव नेपालको आफ्नै पार्टीका सासंसदमाथि आक्रोश:प्रतिगमनको मतियार बन्ने,राजीनमा दिनुस्, निस्किनुस् ! माधव नेपालको आफ्नै पार्टीका सासंसदमाथि आक्रोश:प्रतिगमनको मतियार बन्ने,राजीनमा दिनुस्, निस्किनुस् ! – Shilalekha
माधव नेपालको आफ्नै पार्टीका सासंसदमाथि आक्रोश:प्रतिगमनको मतियार बन्ने,राजीनमा दिनुस्, निस्किनुस् !
१० श्रावण २०७८, आईतवार २०:५४
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको दुइ पक्षविचको विवाद सडक देखि सदनसम्म छताछुल्ल हुनेगरी पोखिएको छ ।
यसअघि पार्टीका कार्यक्रममा एक पक्षले अर्कोपक्षलाई होच्याउने गरी भाषणवाजी गरे पनि आइतबार भने संसदीय समितिको वैठकमै भनाभन भएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको वैठकमा त्यस्तै दृश्य देखियो ।
सडकमा युवा संघ र अनेरास्वियु उतारेर कहिले कार्यकर्ताई बाँदर बनाउने त कहिले आइटी सेना गठन देखि पिपुल्स भोलिन्टेयर जस्ता संगठन बनाउन दुई पक्षविच होडबाजी चल्ने गरेको छ । यस्तै घट्ना भएको छ, आइतबार संसदमा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद नारदमुनि राना र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भनाभन भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वैठकमा नेता नेपाललाई डाकिएको थियो ।
वैठकको सुरुवातमै सम्बोधन गरेका नेता नेपालले संसद पुनस्स्थापित भएकोमा हाम्रो हृदय गदगद भएको छ । त्यसमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएकोमा, साहसपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकोमा म मान्य सदस्यहरूलाई धेरै-धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो कदमले प्रतिनिधिसभालाई जोगाएको छ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेको छ । न्यायपालिका जोगाएको छ । कार्यपालिका जोगाएको छ । न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा अभिवृद्धि गरेको छ ।
‘जो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा घरमा गएर सुतिरहेका थिएु, रानाले भने, ‘तिनैले अहिले संसद भनेर कराउनुको औचित्य छैन। संसद विघटन राजनीतिक निर्णय हो। त्यस निर्णयमा पुर्‍याउनेहरू दोषी हुन्।’
माधव नेपाललाई कटाक्ष गरेपछि दीपकप्रकाश भट्ट बीचैमा बोले। उनले ठूलो स्वरमा ‘प्रतिगमनका मतियार’ भन्दै रानालाई रोक्न खोजे।
‘के कुरा गरेको प्रतिगमनको मतियार बाहिर जानुहोस्’, भट्टले भने।
माधव नेपाल आक्रोशित हुँदै रानाप्रति कड्किए- प्रतिगमनको मतियार बन्ने, राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् ।